Iowa maanta waxay soo warisay kororkeedii ugu badnaa ee maalinlaha ah ee dhimashada COVID-19 | KWIT
Somali News 11.25.2020
Degmada Woodbury, waxaa jiray 49 kiis oo lagu daray wadarta kiisaska.
Gobolku wuxuu hada gaadhay in kabadan 10 kun oo kiis oo coronavirus ah iyo 96 dhimasho ah, sida laga soo xigtay Caafimaadka Degmada Siouxland.
Tan iyo markii uu cudurku faafay bishii Maarso, in ka badan 218 kun oo qof ayaa laga helay cudurka halka 3,365 kiis oo coronavirus ahna la soo sheegay ilaa shalay. Isbitaalada Iowa waxay la halgamayaan kor u kaca coronavirus.
Sariiro la’aan iyo shaqaale la’aan ayaa ku qasabtay qaar ka mid ah isbitaalada Iowa inay bukaanleyda u wareejiyaan xarumo kale sida uu sheegay madaxweynaha ururkan, shir jaraa’id uu qabtay.
Iowa Workforce Development waxay soo warinaysaa in 9,458 shaqaale ah ay xareeyeen sheegashooyin cusub oo ku saabsan faa'iidooyinka shaqo la'aanta usbuucii la soo dhaafay. Taasi waa koror ka badan 3,000 tan iyo usbuucii ka horreeyay waana tan ugu badan hal toddobaad illaa iyo Luulyo.
Warshadaynta iyo dhismuhu waxay ahaayeen warshadaha sheegashooyinka ugu badan leh.
Tirada dadka reer Iow ee sii wadaya qaadashada dheefaha shaqo la'aanta ayaa sidoo kale kor u dhaaftay in ka badan 37,000.
Tartan taariikhi ah oo u dhow Kursiga 2aad ee Golaha Deegaanka ee Iowa ayaa laga yaabaa inuu ku soo dhowaado barbaro. Dimuqraadiga Rita Hart ayaa u gooysay hogaamiyaha Jamhuuriga Mariannette Miller-Meeks ’35 cod oo ka badan 394,400 oo qof oo la dhiibtay, dhamaan seddexdii degmo ee 24ka degmo ka kooban ayaa ka warbixinaya natiijooyinka tirintooda. Tartanku waa kan ugu dhow qaranka,